Uri Kukundwa Nemanzwiro Asina Kunaka Here?
Dambudziko: Zvinhu Zvausingagoni Kuchinja
Unogona Kurarama Upenyu Hwawaida Here?
NYAYA IRI PAKAVHA | UPENYU HWAURI KURARAMA NDIHWO HWAWAIDA HERE?
PANE here paunombosuruvara, kungonzwa hasha kana kuti kungogumbuka? Kana zvichiitika kwauri pamwe imhaka yekuti uri kushaya nguva kana simba rekuita zvinhu zvinonyatsokosha. Saka woita sei? *
MUENZANISO WEMUBHAIBHERI: DHAVHIDHI
Mambo Dhavhidhi akasangana nematambudziko akawanda, akadai sekuzvidya mwoyo uye kusuruvara. Asi chii chakamubatsira kuti arambe achifara? Dhavhidhi akazvisiyira mumaoko aMwari. (1 Samueri 24:12, 15) Akanyorawo zvinhu zvaimunetsa. Uyewo nemhaka yekuti aitenda muna Mwari, aigara achinyengetera. *
Sezvambotaurwa munyaya yokutanga, Gregory ane chirwere chokuzvidya mwoyo. Anoti, “Ndaigara ndichinetseka mupfungwa zvakanyanyisa uye zvakanga zvisingachadzoreki.” Asi chii chakamubatsira kuti afare zvakare? Anoti, “Ndakabvuma kubatsirwa nemudzimai wangu uye neshamwari dzangu. Ndakaendawo kwachiremba ndikatsanangurirwa nezvechirwere changu. Pandakachinja mararamiro andaiita, dambudziko rangu rakadzikira, rakanga risingachanditadzisi kufara. Dzimwe nguva ndinombonetseka mupfungwa, asi ndava kunzwisisa chinozvikonzera uye ndava kuziva zvandinofanira kuita.”
“Mwoyo unofara unorapa.”—Zvirevo 17:22
Kana paine zvinhu zviri kukutadzisa kufara, edza zvinotevera:
Nyora pasi zvinhu zvacho.
Udza hama yako kana kuti shamwari yako yepedyo.
Usakurumidza kupererwa. Somuenzaniso, zvibvunze kuti, ‘Chii chaicho chiri kumbozvikonzera?’
Usaramba uchingonetseka, wakatsamwa kana kuti wakangogumbuka. Asi ita zvimwe zvinhu zvinobatsira. *
Zvinonyanya Kukosha: Kazhinji chinotitadzisa kufara hazvisi zvinhu zvatiri kusangana nazvo asi maonero atinozviita.
^ ndima 3 Dzimwe nguva kusuruvara, kunzwa hasha kana kuti kugumbuka zvinokonzerwa nechirwere chinenge chichitoda chiremba. Mukai! haitauri kuti marapiro api akanaka kudarika mamwe. Munhu anofanira kufunga, ozvisarudzira kuti orapwa sei.
^ ndima 5 Mapisarema akawanda ari muBhaibheri minyengetero yakanyorwa naDhavhidhi.
^ ndima 13 Kuti unzwe zvakawanda, verenga nyaya inoti, “Ungaitei Kana Uchizvidya Mwoyo,” iri muNharireyomurindi yaJuly 1, 2015.
Pane zvinhu zvitatu zvatinopiwa naMwari zvinotibatsira patinenge takaora mwoyo.